How to Get out of the Payday Loan Trap - Sicko News
Amaahda maalintii waxay u muuqan kartaa sida ugu wanaagsan ee lagu heli karo xoogaa lacag ah marka aad u baahatid. Iyagu waa xalka muddada-gaaban dhibaatooyinka lacageed oo laga yaabo inaad kala badh ku dhacdo bisha ka horreysa maalinta lacag bixinta, kumanaan kun oo qof ayaa ka faa’ideysata sannad walba.
Si kastaba ha noqotee, adeegsadayaal badan oo amaahda maalmeed waxay ku dhacaan dabin, halkaas oo ay u baahan yihiin inay si joogto ah u amaahdaan lacag si ay ugu sii noolaadaan. Nasiib wanaagse, waxaa jira qaabab looga hor tagi karo dabinkaas.
Xitaa haddii aad isku aragtid inaad ku xayiran tahay wareegaan oo aad si isdaba joog ah u qaadatid amaahda mushaharka, micnaheedu maahan inaysan jirin meel looga baxo.
Faa’iidooyinka amaahda mushaharka
Amaahda maalmeedku waa kuwo caan ah maxaa yeelay waxay leeyihiin faa’iidooyin badan. Uma baahnid amaah wanaagsan si aad u hesho deyn, taas oo micnaheedu yahay in dadka leh deyn liita ay heli karaan lacagtii ay ugu baahnaayeen si dhakhso ah. Aad bay u fududahay in la helo, iyo foom fudud oo internetka ah ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan si aad u buuxiso si aad mid u hesho.
Macaamiisha guud ahaan looma oggola inay amaahdaan wax ka badan $ 1000, taasoo macnaheedu yahay inay jirto fursad yar oo aadan awood u yeelan doonin inaad dib u soo celiso markii maalinta lacagta la wareego. Maadaama oo kaliya aad amaahan karto lacag aad u yar, ma heli doontid qaddar aad u xun oo aad kubixiso maalinta lacagta.
Dabinka daynta ee mushaharka
Ku lug lahaanshaha wareegga amaahda mushaharka badanaa waxay bilaabataa markaad mid qaadatay laakiin markaa dib ugama bixin kartid maalintaada. Tan waxay noqon kartaa maadaama aadan caqli ku laheyn lacagtaada, ama aad leedahay biilal aad u badan oo aad bixinaysid oo aadan mudnaanta siinin bixinta amaahda bixinta.
Maadaama aadan awood u lahayn inaad dib u soo celiso lacagta adoo isticmaalaya dakhligaaga, waxaa jira dhowr qaab oo aad xaaladda wax uga qaban karto. Dad badani waxay badanaa u jeestaan ​​shirkadaha kale ee amaahda ee maalinta, iyagoo doorta inay amaahdo lacag badan si ay u bixiyaan amaahda mushaharka ugu horreeya. Tani waxay badanaa macnaheedu tahay inay awoodaan inay bixiyaan qaar ama dhammaantood amaahdii hore, laakiin hadda waxay leeyihiin amaah cusub. Hadaanay ku bixin deyntaas taariikhda loo qabtay, wareegu wuxuu soconayaa ilaa ay ku leeyihiin lacago fara badan shirkado amaah ah oo kala duwan.
Markaad awoodi weydo inaad bixiso deynta waqtigii loogu talagalay, waxaad la imaan doontaa ujrooyin soo daahay iyo khidmad dulsaar oo dheeri ah, taasoo si weyn u kordhin doonta lacagta lagugu leeyahay shirkadda amaahda bixinta maalinta. Maaddaama aad hadda haysatid lacag badan oo aad iska bixisid, waxay kugu adkaynaysaa inaad si buuxda u bixiso deynta, adoo abuuraya dhibaato muddo dheer sii dheeraada.
Ka bixidda dabinka
Sida ugufiican ee looga bixi karo lacagbixinta deyn bixinta waa in lala yimaado qorshe adag. Tan waxaad ku sameyn kartaa adoo kala hadlaya dhaqaalahaaga iyo dib u bixinta shirkadaha shirkadaha amaahda oo kugu leh lacag. Haddii aad kaliya ku leedahay 2-3 shirkadood xoogaa lacag ah, waa mid si fudud loo maamuli karo, waxayna kuxiran tahay sida ay iskaashi u leeyihiin shirkadaha, waxaad awood u yeelan kartaa inaad sameysato qorshe dib-u-bixin macquul ah.
Haddii aad haysatid shirkado badan oo aad bixin lahayd, waxay noqon kartaa waxyar oo dhib badan, laakiin waa inaad wali awoodid inaad la xiriirto oo aad abaabusho inaad bixiso deynta qaar ka mid ah. Tusaale ahaan, waxaa suuragal ah inaad awoodid inaad siiso $ 20 bishii bil kasta halkii aad ka bixin lahayd lacag badan oo aadan awoodin. In kasta oo tan macnaheedu yahay inaad bixinaysid deynta muddo dheer, ugu yaraan waxaad ugu dambeyntii noqoneysaa bilaa-deyn.
Isku day inaad bixiso deynta yar marka hore si loo yareeyo tirada shirkadaha amaahda ee aad la macaamilayso.
Waa inaad sidoo kale furtaa koonto bangi kale si shirkadaha shirkadaha amaahda mushaharku u heli waayaan inay toos lacagta uga galaan jeegaaga bil kasta. Markaa waxaad yeelan doontaa awood badan oo aad ku bixiso waxa aad bixinaysid, waxaadna weli awood u yeelan doontaa inaad iska bixiso biilasha gurigaaga iyo kharashyada kale adigoon ka walwalayn lacagtaada in lagu soo celiyo.
Ka taxaddar oo caqli yeelo
Amaaho maalmeedku waxay kaa caawin karaan markaad u baahato, mana jirto sabab aad u dalban weydo mid markii aad u baahato lacag yar oo degdeg ah. Si kastaba ha noqotee, inaad taxadar muujiso oo aad dareenkaaga la yeelatid aad ayey muhiim u tahay.
Markaad amaah qaadatay, markasta iska hubi inaad awood u leedahay inaad dib u soo celiso lacagta maalinta la qabtay. Aqri heshiiska si buuxda ka hor intaadan sixiix elektroonik ah u saxiixin, waxaadna ku qortaa jadwal taarikhda ay tahay in la bixiyo.
Markaad hesho jeeg-jeegaaga, ka dhig dib u bixinta amaahda mudnaanta koowaad. Markaad sidaa sameysid, wax dhib ah kuguma soo kici doono, dhibcahaaga amaahda waxba yeeli mayso oo waxaad awood u yeelan doontaa inaad gasho bisha soo socota iyada oo aan wax walwal ah ama deyn ah bixinayn.
how to How to Get out of the How to Get out of the Payday How to Get out of the Payday Loan Trap